minisiteran’ny fanatanjahantena Malagasy ary ny solontenan’ny COM no nanokatra sy namarana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriambe tsy ara-potoanan’ny baolina kitra Malagasy natao tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly alarobia 12 jona ka niantsoana an’ireo ligin’ny baolina kitra miisa 22 eto Madagasikara hanatrika izany. Nankatoavin’ireo ligy 21 ara-dalàna tamin’izany ary ny fehezan-dalàna hanatsarana ny fizotran’ny fifidianana hatao sy ny vinavinana datim-pifidianana naroson’ity “Comité de normalisation FMF” ity ary efa nalefany tany amin’ny FIFA. Nifanarahan’ny rehetra fa nanomboka omaly 12 jona ka hifarana ny 12 jolay 2019 ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo maniry hirotsaka hofidiana filoha vaovao sy ireo hirotsaka ho mpikamban’ny komity mpanatanteraky ny FMF. 01 aogositra 2019 : Famoahana ofisialy ny lisitr’ireo ekena hofidiana. 02 aogositra 2019 : Fanaovana antsapaka an’ireo kandida ho filoha hapetraka amin’ny bileta tokana sy fidiran’izy ireo ao amin’ny haino amanjerim-panjakana. 08 aogositra-22 aogositra 2019 : fampielezan-kevitr’ireo kandida ho filoha. 24 aogositra 2019 : Fivoriambe hifidianana ny filoha vaovao sy ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny FMF sy famoahana ny vokatra vonjimaika. 01 septambra 2019 : Famoahana ofisialy ny voka-pifidianana. 02 septambra : Famindram-pahefana eo amin’ny “Comité de normalisation” sy ny filoha vaovaon’ny FMF.